Ndi umu akwukwo guru akwukwo FIATA | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulUlo akwukwo akwukwo nke FIATA
Ulo akwukwo akwukwo nke FIATA
18 / 09 / 2019 34 Istanbul, General, Ụzọ Awara Awara, Mpaghara Marmara, Turkey
agụmakwụkwọ Fiata nyere ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ sekọndrị nke anọ
Ọzụzụ ọzụzụ FIATA, nke International Transport and Logistics Service Productionrs Association (UTİKAD) haziri site na nkwado nke Istanbul Technical University Continuing Education Center (İTÜSEM), nyere ndị gụsịrị akwụkwọ semester nke anọ. 16 Septemba 2019 30 weere diplọma ndị na-esonye aha ya na ngalaba tozuru etozu na ememe e mere na RadissonBlu Hotel Şişli na Mọnde.
Maazị Şadan Kaptanoğlu, Onye isi oche nke Board of Directors of BIMCO na İMEAK berlọ Mbupu Onye isi oche nke Board of Director of Istanbul Chamber of Commerce Münür Üstün na TEDAR Onye isi oche nke Kọmitii Nduzi Tuğrul Günal kwuru okwu mmeghe na mmeghe mmeghe nke UTİKAD Emre Eldener. Obi dị anyị ụtọ na anyị nyere ndị gụchara akwụkwọ anọ anyị afọ a. Ana m ekele onye ọ bụla tinyere oge ha dị ukwuu iji gụọ akwụkwọ a bara uru. ”
International Transport and Logistics Service Productionrs Association (UTİKAD) na-aga n'ihu na-enye aka na ngalaba ọrụ ụzụ Turkey. 150 mba ebe banyere 10 nde mmadụ na-arụrụ ọrụ, etinyere 40 puku kwara nhazi na lọjistik ụlọ ọrụ na-anọchi anya International ajụjụ Works nhazi Federation of Associations na ọtụtụ mba site Fiat FIATA ubre na Education nyere ọhụrụ na-agụsị akwụkwọ n'okpuru UTIKAD n'elu ụlọ ke Turkey. 30 sonyere 16 onye mezuru FIATA Diploma Ọzụzụ nke UTİKAD haziri site na nkwado nke İTÜSEM 2019 September XNUMX natara diplọma ya na ememe e mere na RadissonBlu Hotel Şişli na Mọnde.
30, onye mezuru ọzụzụ ọzụzụ FIATA nke ọma, natara mmemme nke onye sonyere na Emre Eldener, Onye isi oche UTİKAD Emre Eldener, Onye isi oche FIATA na Onye isi oche UTİKAD Turgut Erkeskin, Onye isi oche UTİKAD Onye isi oche na FIATA Honono Member Kosta Sandalcı, UTİKAD Onye isi Onye isi Ayş Nur Esin, Onye bụbu onye otu na onye bụbu onye odeakwụkwọ nke UTİKAD Board of Direction Arif Davran, Onye isi oche nke UTİKAD Board of Direction Cihan Yusufi, Onye isi nke UTİKAD Board of Directors and Mazị na-arụ ọrụ na Group Onye isi oche Mehmet Memzal, Onye otu UTİKAD Board of Director and Onye Ọrụ Ndị isi na-arụ ọrụ okporo ụzọ Ayşem Ulusoy nke Board Onye otu na onye isi oche nke Maritime Work Group Cihan Özkal, Onye otu Board nke UTİKAD na Onye isi oche nke Railway Work Group Ekin Tırman, Onye isi oche nke UTİKAD Serkan Eren, onye otu Board nke UTİKAD Barış Dillioğlu, Onye isi UTİKAD General Manager Cavit Uğur, Onye isi nchịkwa azụmahịa ITU Ngalaba nke Injinịa Mịnịstrị na FIATA Diploma Education Coordinator Assoc. Dr. Na mgbakwunye na Murat Baskak na ndị na-enye ọzụzụ ọzụzụ FIATA Diploma, BIMCO Onye isi oche nke oflọ Ọrụ Nhazi na İMEAK Chamber of Shipping Vice Chairman Şadan Kaptanoğlu, Chamlọ Istanbullọ Ọrụ cere Ahịa Istanbul Memü Münür Üstün na Onye isi oche nke Board of Directors Tuğrul Günal kwanyekwara ntinye aka ha.
'Ana m ekele ndị niile sonyere'
N’okwu mmeghe ya, Onye isi oche UTİKAD Emre Eldener kwuru, X enyi 30 nke gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ, wepụtara oge ha pụrụ iche nyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ na Satọde ọ bụla wee bịa na klas ndị a. E nwere ọrụ dị mkpa ịgachi, otu ọkwa akara ọkwa. Ha ejirila oge ha nọrọ ebe a, ewezuga ọrụ ha. N'okpuru nduzi nke Murat,
lee, anyị abịawo na njedebe nke otu afọ nke anyị nwere ọdụ dị mma ma nwee nnukwu afọ ojuju. Ana m ekele ndị sonyere anyị. ”
Soro Onye isi oche nke UTİKAD Eldener, ngalaba ITU Ngalaba Nlekọta nke Enginelọ Ọrụ Injinia na FIATA Diploma Education Coordinator Assoc. Dr. Murata President, nke a sara mbara ọzụzụ nyere ya ekele UTIKAD jisiri ka a kpọkọta ndị lọjistik oru na Turkey. Na-ekele ndị sonyere na ha dechara ọzụzụ ọzụzụ ahụ siri ike na ogologo oge, Assoc. Dr. Murat Baskak kwuru, bu N’afọ a, anyị nwere ohere iji mee ka agụmakwụkwọ anyị bakwuo uru. Enwere m olileanya na n’afọ ọzọ ọ ga-akachasị mma. E nyere ndị sonyere anyị ọzụzụ dị iche iche na FIATA Diploma na ITU Logistics expert Asambodo. ” N’imesi ike na nkuzi akwukwo FIATA di iche n’etiti usoro ihe omumu ihe ndia na ihe ozo, Baskak gosiputara obi uto na akuku ngalaba mmuta ahu na nzaghachi site n’aka ndi sonyere.
Kpọtụrụ Turgut ozugbo
'AKW EDKWỌ NSỌ EGO NA-EKWU ND PR KWES OR' ANY ''
Turgut Erkeskin, Onye isi oche nke FIATA bụ onye bidoro okwu ya site na ime ka mkpa ọ dị ọzụzụ ọzụzụ na azụmaahịa ọkachamara, kwuru, sị: FI FIATA, ọgbakọ ndị na-abụghị gọọmentị nke ngalaba ọrụ lọjistik n'ụwa niile, na-arụ ọrụ maka mmepe nke ngalaba ahụ kemgbe 1926, afọ ahụ ka e guzobere ya na Vienna. FIATA, nke na-ahazi nzukọ nzuko ụwa niile kwa afọ ma na-enyere ndị aka ya aka ịkọọ nsogbu, mmepe na amụma metụtara mpaghara ahụ; N'otu oge n'ọtụtụ òtù nke United Nations; Nzukọ nke United Nations na ahia na mmepe bụ onye ndụmọdụ na UNCTAD na UN Commission on International Trade Iwu. FIATA na agba mbo ime ka otu ulo oru nha azumahia loktistiko nke ulo oru zuru uwa no na oru ya. N'oge gara aga, akwụkwọ ndị a, nke nyere aka nke ukwuu n'ịkwado mgbanwe mgbanwe ngwaahịa mba ụwa ugbu a na-anọchi anya 'ọdịnala na ntụkwasị obi' n'ụwa; ọ ga-abụrịrị ezigbo ngwaọrụ dị mkpa na azụmaahịa ụwa n'ọdịnihu. Turkey bụ onye so na UTIKAD site na nke a usoro ọzụzụ na-itinye na òkè nke gị, "ka o kwuru.
Erkeskin kwupụtara na ndị sonyere mezuru usoro ọzụzụ ọzụzụ FIATA na-esonye na ntọala FIATA n'ụzọ uche Itibaren Site taa gawa, n'otu aka, ka na-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka mmepe ụlọ ọrụ gị na diplọma nke nzukọ a guzosiri ike kemgbe; N'aka nke ọzọ, ị ga-akwadokwa nrọ a zuru ụwa ọnụ nke FIATA, onye ebumnuche ya bụ ştiril inweta otu ọkwa ọrụ ọrụ na mba niile na ọrụ lọjistik ”. Site na diplọma gị, nke na-ebute gị otu nzọ ụkwụ karịa ndị asọmpi gị ma bụrụ nke a na-ahụta ka ọ dị mma na mba 150, ị ga-ama na ị bụ onye nnọchianya nke ozi a dị oke mkpa nke FIATA ebe ọ bụla ị na-aga. Ọ dị m ka ya bụrụ na ọzụzụ a, nke m nwere ọ toụ ịhụ na mmasị na-aga n'ihu na-abawanye kwa afọ, ga-abụ onye na-akwado gị niile maka gị na njem ọzọ na-esote. " Ná ngwụsị nke okwu ya, Erkeskin nyefere ndị bịara sonyere ekele na ekele nke FIATA Onye isi ala Babar Badat.
Okwu mmeghe nke ememe ahụ gara n'ihu na Onye isi oche nke BIMCO na İMEAK berlọ nke Mbupu Onye isi oche Şadan Kaptanoğlu na onye isi oche TEDAR Tuğrul Günal. Oğlu Logistics bu sine non m. Ekwusiri m ike na ọ dị mkpa na mpaghara lọjistik n'oge ọ bụla azụmahịa m. Ọganiihu na-eme nke ọma na ngalaba dị na nke a na eziokwu ahụ bụ na UT anKAD nyere ọzụzụ mmụta mba ụwa na mba anyị bụkwa ihe nganga nye anyị. Ana m ekele unu niile ”.
N’imesi ike njikọta nke njikọta n’etiti njikwa njikọta na mpaghara enyemaka, Onye isi oche TEDAR Tuğrul Günal kwuru, adımlar N’afọ gara aga, emeela ihe maka njikọta dị mkpa n’etiti TEDAR na UTİKAD. Anyị kwenyere na usoro ndị a dị oke mkpa maka mpaghara anyị. Dịka onye isi oche nke TEDAR, anyị nwere ohere izute ndị sonyere na nke mbụ afọ a n'ime usoro ọzụzụ ọzụzụ FIATA. Agara m nkuzi nke Emre Eldener, Onye isi UTİKAD, dị ka onye ọbịa na-esonye. N’oge a, ahụm n’onwe m ike n’inwe ọganihu nke FIATA Diploma Education. Ana m ekele ndị niile sonyere na ya. ”
'BEBỌCH BE AH BE B BE Ọ BA Ọ B FOR Ọ B US Ọ B US Ọ B US ỌKAARA'
Onye isi ala UTİKAD na FIATA Member Memor Kosta Sandalcı gwara ndị sonyere n'ememe mmemme a echiche ya. Na-ekwu na-eje ozi ruo ọtụtụ afọ fıata Sandalcı "ka e nye ya ọzụzụ a na Turkey n'okpuru ụlọ UTIKAD a iche iche si enweta obi ụtọ n'ihi na m. Ekwenyere m na ọzụzụ a bara uru ga-abara ndị niile sonyere uru.
N'ịgbasa okwu mmeghe, Emre Eldener, Onye isi oche nke UTİKAD, ndị na-azụ ọzụzụ FIATA Diploma bụ ndị bịara ememe ahụ, Piri Reis Mahadum Ngalaba Economics na Ngalaba Nchịkwa na Njikwa Ọchịchị. Onye nkuzi Atiye Tümenbatur, onye bụbu onye otu na onye bụbu onye odeakwụkwọ ukwu nke UTİKAD Board of Direction Arif Davran, onye otu onye isi oche nke UTİKAD na MNG ụgbọ elu Mịnịsta Nlekọta Serkan Eren, onye otu onye isi na ndị isi oche nke UTİKAD na onye isi njikwa nke Armada Maritime Services Cihan Özkalant, Trainer, Trainer Trainer Onye isi nchịkwa ihe ize ndụ nke UTİKAD Pınar Kapkın, SCHENKER ARKAS Istanbul Branch Manager Mahfi Kızılkaya, Onye isi oche TEDAR Tuğrul Günal na UTİKAD'ın Onye isi ala mbụ na onye otu Member FIATA asọpụrụ Mr. Costa Sandalci nyere 'Asambodo nke Inwe Ekele'. Emre Eldener, Onye isi oche nke UTİKAD, onye nyekwara aka na FIATA Diploma Training dị ka onye na-azụ ọzụzụ, natara Asambodo Nnabata n'aka Kosta Sandalcı.
Kpọtụrụ Serkan ozugbo
SERKAN ERENME NSỌ KAR THERAIN AINBỌCH OF AH THÉ ”
N'afọ a, e nwere onye mbụ nọ na mmemme ngụsị akwụkwọ ahụ. Mgbe ọzụzụ ahụ gachara, 'Ekpezizi Onye Nkụzi nke Afọ' n'ihi nyocha ndị nkuzi natara n'aka ndị sonyere. Onye otu UTKAD Board na MNG Airlines Ground Operations Onye isi ala Serkan Eren natara asambodo yüksek nke Afọ ”na ọzụzụ 2018 - 2019 nke ọzụzụ ọzụzụ FIATA. Eren, onye bịara n'ọgbọ a kụrụ aka maka ndị bịaranụ, natara akwụkwọ ikike ya n’aka Emre Eldener, Onye isi ala nke UTİKAD.
'Achọrọ m ịrụzu ọzụzụ dị mkpa'
Ndị gụsịrị akwụkwọ ahụ natara diplọma ha n’aka Onye isi oche na ndị otu UTİKAD Board of Direction, ndị isi oche mbụ nke UTİKAD Costa Sandalcı na Ayşe Nur Esin, onye bụbu onye otu na onye bụbu onye ode akwụkwọ nke UTİKAD Board Director and General Director Cavit Uğur nke UTİKAD. Mgbe o mechara akara izizi FIATA Diploma Training, ProSMT Elektronik Logistics Manager Nalan Akbaş Sonkaya kwupụtara mmetụta ya. Sonkaya; FI m kwenyere na ọzụzụ ọzụzụ FIATA m zutere ka m na-eme nyocha iji meziwanye onwe m bụ nnukwu ohere maka ọrụ m. Ọ ga-amasị m ikele UTİKAD na İTÜSEM, aha ndị ruru eru ngalaba lọjistik na ndị na - enye anyị ọzụzụ ebe ọ bụ na ha nwere ike ibute ụdị agụmakwụkwọ bara uru na obodo anyị. Obi dị m ezigbo ụtọ na emechara ọzụzụ a ..
Ememe ngụsị akwụkwọ ahụ mechiri emechi mgbe emechara ememme a.
Ndị na - eso maka ọzụzụ DATA FIAT Diploma Nke Anọ…
Ndị na-aga Ụlọ Akwụkwọ Ọmụmụ Diploma na-aga ileta Lotus
Ndị na - eso Trainingzọ Ọzụzụ na FIATA Ubi
Ohere omumu ugwo na nkuzi omuma
Railway Vocational School Alumni Rice Day…
Ndị gụsịrị Akwụkwọ na Rail na-achọ Ibu Ụzọ na Nhọpụta site na TCDD
CDlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Ọrụ TCDD gụsịrị akwụkwọ 45 Afọ mgbe e mesịrị…
Ihe eji eme ka ugbo ala nke Apaydın
Kayseri Ụgbọ njem Inc. 49 Na-enye Ọzụzụ Ọha Ọha
DeSA na-enye nnukwu ngwa ngwa (MACS) Ọzụzụ
Spor A.Ş, Ịgba Ọkụ na Snowboarding maka 2 puku Ụmụaka
IETT Football Team ghọrọ dike ụwa maka oge nke anọ
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 25 August 1922 Anọ Railway…
Taa na History: 25 August 1922 Fourth Railway
Turkey si National ngwakọ Lokomotif`L bụ a-anọ n'ụwa
İMEAK Ụlọ nke Mbupu
Ọzụzụ Ọzụzụ FIATA
Mmemme Nkụzi FiATA
Ngalaba akụrụngwa Turkish
Mayor İmamoğlu 'Ibu Ibu Istanbul bụ Istanbulgbọ njem'
14 oru ohuru nke aga-ewebata n’ime ulo oru nchekwa